PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Bavale isango bekhononda ngenyufomu
Bavale isango bekhononda ngenyufomu
Bathi isikole siwubizisa ngokweqile
Ilanga - 2019-01-10 - Izindaba - NTOMBI KHUMALO
KUTHIKAMEZEKE ukufunda eNazareth Primary ePinetown izolo ngoLwesithathu ngesikhathi abazali babafundi abebedinwe begane unwabu, bevala isango befuna izimpendulo mayelana nokuthi isikole sivumelane nobani ukuba umfaniswano waso udayiswe ngaphakathi nokuthi ubize amanani aphezulu.
Laba bazali batshele ILANGA ukuthi isikole sibatshele ngalolu shintsho - abangahambisani nalo - ngosuku okuvalwe ngalo izikole nyakenye.
“Ngesikhathi abantwana belande amariphothi esikoleni, banikwe nezincwadi ebezisho ukuthi umfaniswano wesikole ngeke usatholakala ezitolo ebesivame ukuwuthola kuzona, njengoGem, kepha usuzodayiswa ngaphakathi esikoleni.
"Sithe uma sibheka amanani ozodayiswa ngawo, sabona ukuthi makhulu kakhulu ngoba abelinganiselwa ku-R1 300 ingane ngayinye uma ubala ususa ekhanda uya onyaweni,” kusho omunye wabazali. Batshele ILANGA ukuthi inkulu kakhulu le mali uma beyiqhathanisa nabebevame ukuyikhipha uma bethenga ezitolo. Bathe njengoba bevala isango lesikole nje, bafuna ukuthi isikole sichaze ukuthi sibonisane nobani ngala manani.
“Kasinikwanga isikhathi esanele ukuba silungiselele lolu shintsho lokuthi umfaniswano usuzotholakala esikoleni.
"Besingeke sibe nankinga ukuba besitshelwe kusenesikhathi futhi ungabizi ngalolu hlobo,” kusho omunye umzali.
Abazali bakhale ngokuthi abanye babo banezingane ngazine kulesi sikole, okwenza kusinde kwehlele kubona njengoba abanye babo bengasebenzi nje.
Uthishanhloko wakulesi sikole, othe unguNkk Monebala, uthe abazali kabakhulumi iqiniso uma bethi kabaziswanga ngoshintsho lomfaniswano kusenesikhathi.
Uthe ikhona imihlangano eyabizwa yisikole nyakenye lapho lwaphakanyiswa khona lolu daba kwaze kwafikwa esivumelwaneni.
“Abaningi kabakhombisanga ukuba nenkinga, siyaxakeka manje uma sebekhononda. Ngicabanga ukuthi laba abakhonondayo yidlanzana nje elingafuni ukwamukela ukuthi kunoshintsho esikoleni,” kusho uNkk Monebala.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthe umnyango uzolufakela izibuko lolu daba. Uthe bazoxhumana nehhovisi labo lesifunda, iPinetown, lisondele kulesi sikole liyozwa ukuthi kwenzekani.
Uthe ngokujwayelekile, ngaphambi kokuba isikole sishintshe umfaniswano, kufanele kube nemihlangano phakathi kwaso nabazali. Kufanele kufinyelelwe kulesi sivumelwano kuphela uma bonke abathintekayo beneliseka ngezingxoxo ezenziwe emihlanganweni.
ABAZALI baseNazareth Primary School, bavale isango bekhala ngamanani omfaniswano osudayiswa ngaphakathi esikoleni.